5 Qalabka Neat Semalt SEO Qalabka Iyo Falanqaynta Websaydhadu Waxay Hagaajinayaan Heerarka Websaydhkaaga
Ma waxaad tahay milkiile ganacsi yar, dukaan internetka ah, bilaaba, ganacsade bilaash ah, ama qoraa isku dayayay inuu ka dhigo websaydhkooda mudada ugu dheer ee aan nasiib uheyn ilaa iyo hadda?
Ma waxaad ka heshay adduunka "SEO" isku dhacyo taxane ah, oo aan macno samaynaynin oo aad waqti badan iyo dadaal badanba ku lumineyso?
Hagaag, keli ma tihid!
Helitaanka boggaaga darajadiisu waa mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee meheradda lagu socodsiinayo internetka, iyo hubinta in degelkaagu ka muuqdo bogga ugu horreeya ee Google waa inuu noqdaa mid ahmiyadahaaga ugu sarreeya.
Sida lagu sheegay daraasad, 95% taraafikada qadka waxaa loo xareeyaa websaydhada ka soo muuqda bogga koowaad ee Google, oo keliya 5% waxaa hela bogagga xiga.
Haddaba, ka hor intaadan u maleynin in kulankaan uu dhamaaday, helitaanka bartaada meelaynta ma ahan wax adag oo dhan. Kaliya waxay qaadataa dulqaad iyo dadaal dheer. Semalt, waxaan fahamsanahay in wax weyn oo waqtigaaga ah uu ku luminayo socodsiinta ganacsigaaga iyo maaraynta dhammaan culeyska shaqada ee la socota.
Taasi waa sababta aan ugu habayney aaladahayaga SEO iyo adeegyadeena Shabakada Websaydhka oo keliya ma ahan inay kaa caawiso inaad darajo sare ka gasho Google, laakiin sidoo kale waxaan kugu siineynaa inaad marin u hesho xogta iyo tirakoobka muhiimka ah ee dadka booqda shabakadaada. Waqti fog, macluumaadkani si wanaagsan ayuu saameyn ugu yeelan karaa go'aamada ganacsigaaga, wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si ficil leh u tilmaamto dabeecadaha macaamiisha adoo muujinaya baahiyahooda si sax ah oo ugu dambeyntii xiri doona heshiisyo badan.
Dadka ka dambeeya Semalt waxay u shaqeeyeen si daal iyo xamaasad leh oo ku saabsan horumarinta qalabkan SEO sanado badan oo waayo aragnimo shaqsiyeed ah. Aynu si dhow u eegno sida qalabka Semalt SEO iyo astaamaha Shabakadaha Falanqaynta Websaydhadu ay kaaga caawin karaan adiga iyo meheraddaadu inay barwaaqoobaan.
5 Siyaabood oo loo adeegsado Aaladda Semalt SEO Qalabka iyo Falanqaynta Websaydhka Waxay Hagaajisaa Qiimaynta Websaydhkaaga
1. Kordhinta Websaydhka:
Semalt wuxuu bixiyaa adeegyo dhameystir ku habboon oo mareegaha ka caawiya websaydhka inuu ka sareeyo heer sare, dadaal la'aan, iyo si fudud mashiinnada raadinta sida Google . Websaydh la habeeyay ayaa si fiican uga soo horjeeda qiyaasaha sida taraafikada dabiiciga ah culus, qadarka wakhtiga ku qaadatay goobta, iyo haysashada qiime hoose, taas oo asal ahaan macnaheedu yahay tirada dadka soo booqda bartaada isla markaaba baxda. Kooxdayada khubarada ah ee SEO waxay dhahaan baahiyahaaga gaarka ah ee shabakadaada iyagoo sameeya samaynta SEO iyo qorshe kobcinta webka oo soo jiidata macaamiisha badan isla markaana ka caawineysa sii fidinta ganacsigaaga.
Hubinta in deg deg deg deg ah boggagaaga uu yahay qeyb kale oo muhiim u ah kobcinta webka. Haddii ay ku qaaddo goobtaada in ka badan 3 ilbidhiqsi oo ay ku shubto, waxaa jira fursad aad u sarreysa oo dadka isticmaala ay jahwareeraan kana baxaan.
Tani waxay si toos ah u yareynaysaa taraafikada soo gala iyo sidoo kale tirada soo noqoshada, taas oo saameyn ku yeeleysa sida wanaagsan ee boggaaga loo meeleeyay. Qalabka Semalt SEO wuxuu hubiyaa in shabakadaada ay si fiican ugu habboon tahay inay la kulanto dhammaan bartilmaameedyada lagula taliyay isla markaana ay jawaab u tahay inay si aan kala go 'lahayn ugu shaqeyneyso miisasyada labada dhinacba ah iyo taleefannada gacanta / kiniiniyada maxaa yeelay in kabadan 50% taraafikada qadka internetka waxaa laga helaa iyada oo loo marayo taleefannada casriga oo keliya.
Kordhinta shabakada oo kufilan macneheedu waxa weeye in booqdayaashaada ay ku yeelan doonaan khibrad wanaagsan oo isticmaale marka ay soo booqdaan bartaada internetka, taasoo ka dhigaysa inay u badan tahay inay soo laabtaan oo ay had iyo goor fiiriyaan mustaqbalka.
2. Cilmi baarista ereyga
S adeegyada 'AutoSeo' ee EMalt oo ay ku jiraan cilmi-baaris qoto-dheer oo qoto-dheer oo loogu talagalay bartilmaameedka aad u fiican, bogga sare u qaadista, iskuxirka-dhismaha, iyo warbixinno dhammaystiran oo lafa-guris ah oo dhammaantood lagu qaabeeyey hal hadaf maskaxda ku haya: ka-caawinta shabakadaada inaad u korto meesha ugu sareysa Google SERPS.
Laakiin si loo helo darajo, taraafikadaada suuragalka ah waxay u baahan tahay jihooyin iyo calaamado muujinaya jiritaanka boggaaga si ay kuu soo gaaraan. Sidee ayaad calaamadahan u dhigtaa si ay kuugu yimaadaan?
Waa hagaag, iyada oo loo marayo cilmi-baarista ereyga muhiimka ah! Waa daacadnimo qof maskax furan. Sababtoo ah aan daacad u noqonno, oo ay ku noolyihiin in kabadan 3 bilyan isticmaaleyaal internetka ah, websaydhkaagu waa sida kalluun yar oo ku jira badda weyn. Semalt ayaa kaa caawin kara inaad taas beddesho.
Cilmi baarista ereyga ayaa ah aasaaska SEO wanaagsan, iyo ogaanshaha sida saxda ah ee ereyada lagu daro waxyaabaha aad internetka ku dhajiso waxay qeexeysaa kaliya maahan darajooyinkaaga, laakiin taraafikadaada soo socota, kobcinta websaydhka, iyo inbadan.
Haddii aad suuq gaynayso badeecad cusub, adeeg ama naftaada, abuurista macnaha guud waa lama huraan, iyo helitaanka ereyo muhiim ah oo ku habboon xaaladdaas ayaa ah habka kaliya ee lagu hubin karo in websaydhkaagu gaadho dad aad u tiro badan.
Haddii aad u baahan tahay inaad isticmaasho erey-bixinno gaagaaban ama fure-dabadheer, ama inaad si fudud u ogaato tirada saxda ah ee wakhtiyada lagu xuso ereyga muhiimka ah, Semalt AutoSEO kama jawaabi karo oo keliya su'aalahaas adiga oo keliya laakiin sidoo kale wuxuu maareeyaa shaqada sidoo kale . Waxaad ku dhihi kartaa nabad gelyo ka walwalka ku saabsan sameynta cilmi-baarista ereyga muhiimka ah ee websaydhkaaga oo aad si kalsooni leh ugu tiirsan tahay Semalt si uu adiga xirfad ahaan u maareeyo.
3. Qoraalka Qoraalka:
Waxaan ka wada hadalnay daraasad keyword iyo adeegsiga saxda ah ee kor ku xusan, laakiin helitaanka ereyada furaha ma aha hadafka kaliya. Qaabka aad u adeegsaneyso ereyadan furaha ah oo aad u qorto waxyaabaha kuhadlaya dhagaystayaashaada ayaa noqon doona go aan ka gaarista xajista isticmaalaha.
Sideed uheleysaa dareenka isticmaalahaaga, u gudbisaa dhibaatadooda iyo xallinteeda si dadaal la'aan ah, oo aadna u waafajisaa waxa ay rajeynayaan?
Qoraalka qoraalku waa farshaxan, qof walbana ma ahan qoraa u dhashay. Marka taa la yiraahdo, si kastaba ha noqotee, micnaheedu maahan inaadan baran karin inaad abuurto waxyaabo saameyn leh, cad, kooban, iyo macluumaad leh.
Waa inaad fahanto marka ay timaado SEO, "dadku marka hore ayay yimaadaan," mar alla markii aad fahanto taas, way fududaanaysaa inaad qorto waxyaabaha ka dhigaya martidaada inay gasho oo ay sii waddo soo noqoshada.
Qorista nuxurka ayaa sidoo kale macnaheedu yahay inaadan ku qarxin isticmaaleyaashaaga ku celcelin erey-bixin oo aad u badan oo xanaajin kara oo ka dhigi kara isticmaaleyaasha inay lumiyaan. Waxaad u qoraysaa inaad xalliso dhibaatadooda, ma aha inaad mid kale abuurto.
Nuxurka qoraalku waa inuuna rafcaan ka noqon kara dhagaystayaashaaga bartilmaameedka ah laakiin sidoo kale wuxuu lahaan karaa awooda lagu xalliyo dhibaatada ay u yimaadeen. Haddii aysan fulinin mid ka mid ah shuruudahaas, tirada soo-booqdayaasha soo noqda ma sii kordhayaan.
Kooxda qoraalka firfircoon ee Semalt waxay ku xeel dheer yihiin xirfadooda waxayna ka caawin karaan goobtaada inay korodho sidoo kale waxay haysaa socodka iyo soo noqoshada gaadiidka.
4. Horumarinta Websaydhka
Illaa iyo hadda, waxaan soo xusnay dhammaan siyaalladihi qalabka Semalt SEO uu uga caawin karo degelkaaga inuu darajo yeesho, si kastaba ha noqotee, hadaadan mid haysan, ha walwelin. Semalt ma aha oo kaliya darajaynta bogagga jira, laakiin waxay sidoo kale ku horumarisaa fikradaha iyo himilooyinka websaydhada shaqeynaya, laga soo bilaabo xoq.
Waqtiga casriga ah ee aan ku nool nahay, degel ayaa u shaqeeya sida faylalka, dib u bilaaba, iyo hal dukaan istaag dhammaan macluumaadka aad uga baahan tahay ganacsi kasta. Hubinta in ay shaqeyneyso, rafcaan qaadaneyso, wargelinayso, oo si wanaagsan loo qorsheeyay ayaa lamid ah sameynta aragtida ugu horeysa inta lagu guda jiro garoomada lagu iibiyo.
Semalt waxay siisaa koox karti u leh soosaarayaasha shabakada ee yaqaana insanka iyo banaanka websaydhada. Laga soo bilaabo horumarinta bakhaarada ganacsiga E-commerce illaa maaraynta nidaamyada maaraynta maaddada, kooxdeena ayaa bixin doonta adeegyo horumarineed oo websaydh ah oo ka caawinaya ganacsigaaga inuu kobco.
Isku-darka dhammaystiran ee dhammaan aaladaha iyo farsamooyinka SEO, websaydhkaaga waxaa lagu meelayn doonaa heer sare waqti la'aan.
5. Falanqaynta Shabakadda
Ugu dambeyntii, hab kale oo muhiim ah Semalt wuxuu gacan ka geystaa sidii loo qiimeyn lahaa websaydhkaaga iyadoo la siinayo falanqeyn iyada oo loo marayo qiimeynta darajada erayga 'Semalt keyword checker' iyo 'Analyzer Web' si aad ugu sii jirtid isbeddelada ugu dambeeyay.
Falanqeeyahu wuxuu muujiyaa illaa iyo inta ay degelkaagu kujirayo bogga natiijooyinka mashiinka Raadinta Google wuxuuna bixiyaa ereyo muhiim ah oo gacan ka geysan kara kor u qaadista dallacsiinta SEO ee bartilmaameedka. Waxaad sidoo kale heli doontaa inaad la socoto sida ugu fiican ee uu tartankaagu u shaqeynayo oo aad u ogaato waxa iyaga u shaqeynaya.
Falanqaynta ayaa si aad ah muhiim u ah si loo gaaro go'aannada mustaqbal ee la xiriira suuqgeynta iyo ololaha SEO ee bartilmaameedka ah oo aan soo jiidan doonin oo keliya macaamiisha cusub ee sidoo kale kor u qaadi doonta darajaynta. Semalt wuxuu ku siinayaa dhammaan fahamka lagama maarmaanka ah ee aad u baahan doontaa si aad u gaarto go'aannadaas oo ay weheliso talooyin mihnadeed oo ku saabsan qaadista tillaabooyinka xiga.
Adeegyada Falanqaynta Websaydhka ee Semalt waa beddel-ciyaar marka ay timaado ololahaaga SEO.
Kumaa Ka Faa'iidaysan Karta Semalt SEO Qalabka Iyo Falanqaynta Webka?
Hadda, haddii aad la yaabban tahay yaa ka faa'iidi kara qalabka Semalt SEO iyo falanqaynta websaydhka, jawaabta gaagaaban waa qof kasta iyo qof kasta oo leh joogitaan internetka ah.
Jawaabta dheer, dhinaca kale, waa mulkiile ganacsi, ganacsade, shirkado qaali ah, ama adeeg bixiyeyaal gaar ah oo u baahan inay suuq ku iibiyaan xirfadahooda oo u baahan bog deg deg ah dhagaystayaasheeda.
Haddii aad tahay qoraa ku saabsan caafimaadka iyo qaab nololeedka, ama tifaftiraha buugga oo jecel sheekooyinka, ama qof ku xeel dheer teknolojiyadda oo ku raaxeysta dib u eegista aaladaha cusub ee suuqa, Qalabka Semalt SEO wuxuu ka caawin karaa boggaaga inuu gaaro dhagaystayaal badan oo daafaha dunida ah.
Kaliya maahan inaad hesho aragti gaar ah oo loogu talagalay dadkaaga hodanka ah, laakiin sidoo kale dhammaan agabyada kale ee hal meel ah, oo haddii kale aad u baahnaan lahayd inaad shaqsi ahaan u raadsato.
Sidaa daraadeed, haddii aad raadineyso inaad ballaariso meheraddaada internetka ama aad rabto inaad ku iibiso naqshadahaaga qaab dhimis leh boggaaga, Semalt wuxuu kugu celin doonaa wuxuuna hubin doonaa in websaydhkaagu sifiican ugu fiicnaado SEO, ganacsigaaguna uu kobcayo sannado badan oo socda.
Semalt waa bixiyaha suuq geynta dhijitaalka ah ee SEO oo dhan oo dhameystiran oo ganacsigaaga khadka tooska ah u sii qaadi doona. Haddii aad raadinayso kobcinta websaydhka, horumarinta websaydhka, falanqaynta, ama si fudud aad ugu baahan tahay caawimaad abuurista waxyaabaha si buuxda loogu bar-tilmaameedsaday furaha saxda ah, si fudud nala soo xiriir.
Qalabka iyo adeegyada ay bixiso Semalt waxay hubin doontaa in shabakadaada ay gashay darajo sare ee Google. Sidan, waxaad noqon doontaa hal talaabo kahor tartankaaga waxaadna heli doontaa taraafikada dabiiciga ah si loo kordhiyo dakhliga.
Semalt waxay leedahay xirmo kaladuwan nooc kasta oo milkiile ganacsi; haddii aad ubaahantahay AutoSeo, FullSEO, Hormarinta Websaydh ama Falanqaynta Shabakada, la xiriir kooxdayada maanta si aad u ogaatid waxa sida ugu fiican ugu habboon adiga iyo ganacsigaaga, si aan u bilowno safarka ah in websaydhkaaga laga dhigo dhulka.
Falanqaynta ayaa si aad ah muhiim u ah si loo gaadho go'aannada mustaqbal ee la xidhiidha suuqgeynta iyo ololayaasha SEO ee beegsanaya oo aan soo jiidan doonin oo keliya soo jiidashada macaamiisha cusub ee sidoo kale hagaajin doonta darajo sidoo kale.